PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-08-26 - UMBONO:
KULELI sonto siyindlu emnyama siphinde sazithola sizisula amanaphanapha odaka esiphahlekwe ngalo ngumlisa mumbe ozitshela ukuthi ungcono kunathi thina bebala elinsundu, esiwumsinsi wokuzimilela e-afrika.
Ngifisa sengathi bengingakugwema nokumgagula ngegama ngoba igama lakhe lilodwa nje lifana neqatha elingehli emphimbo.
Lo mlisa engikhuluma ngaye ngu-adama Catzavelos, osibize ngamakhafula.
Asikho isidingo sokuba ngichaze kabanzi ngale nkulumo yalo mlisa eqoshwe kwi- video.
Engingakusho nje wukuthi kuyacaca ukuthi ubeneme impela kulelo bhishi abekulo, ethokoziswa wukuthi bekungekho noyedwa webala elimnyama. Mhlawumbe bekungamsiza nje ukuba asale esehlala kulo lelo bhishi, atamase ngoba uma ebuya lapha uzosithola sikhona thina bamnyama, asiyi ndawo ngoba phela yizwe lethu leli.
Ngike ngazinika nesikhathi ngifunda isitatimende sakhe sesixoliso.
Nginongabazane ngalesi sitatimende futhi ngiyazi ukuthi baningi abangakholwa ukuthi ukuxolisa kwalo mlisa kusuka phakathi ekujuleni kwenhliziyo.
U-eusebius Mckaiser, ongumbhali wezincwadi futhi ongumsakazi ungomunye wabashaye amakhala ngalesi sitatimende.
Ezwakalisa uvo lwakhe ngalesi sitatimende, u-eusebius, uthe sizwakala singenabo ubuqiniso.
Uthe akukho lapho lo mlisa evuma khona ngokucacile kulesi sitatimende ukuthi inkulumo yakhe inokucwasa ngokwebala, nokuthi yena qobo lwakhe unobandlululo.
Mina okungenza ngingakukholwa okushiwo yilo mlisa kulesi sitatimende, ngamazwi awashoyo lapho ethi uyayithanda iningizimu Afrika, futhi uyazigqaja ngokuhlala ezweni elihle kangaka, elinomphakathi oxubile (beautiful and diverse country).
Lawa mazwi alo mlisa ayaphikisana nesenzo sakhe sokusibiza ngamakhafula.
Ukusho kanjani ukuthi uyazigqaja ngokuhlala ezweni elino-mphakathi oxubile ngoba yena akakuthandi lokho?
Ingani kule video yakhe weneme, uchazwa wukuthi kuleli bhishi akulo asibonakali nangalukhalo thina bebala elimnyama.
Impela kunuka santungwana ngalesi sitatimende. Bheka nje ngoba kulayini wokugcina uxolisa ngokukhethekile athi: “Emndenini wami, kumama wami, kubaba, kunkosikazi, kumfowethu nodadewethu, nasezinganeni zami eziyikho konke kimi, ngiyaxolisa kakhulu.”
Kodwa akukho lapho exolisa khona abhekise ngqo kithina bebala elimnyama asichaphe ngenhlamba. Lesi sigameko salo mlisa ndinike sikhomba ngokusobala ukuthi kusekude phambili. Mkhulu kakhulu umsebenzi okusafanele wenziwe kuleli lizwe ukulwisana nesihlava esifana notwayi olungapheliyo, sokucwaswa kwethu ngebala lethu elimnyama.
Kuyajabhisa ukubona kuqhubeka izigameko zokucwasa nokuzwa abantu bephimisela izinkulumo
Kushiya umbuzo wokuthi kanti ngempela lawa mahlongandlebe angafuni ukuhlalisana kahle nabanye abantu ayombuleka nini le nkungu egcwele emqondweni.
Njengoba ngondasa (March) inkantolo yemantshi yaserandburg egoli igwebe uvicki Momberg iminyaka emibili ebhadla ejele, kwathi owodwa wesithathu walengiswa, ngemuva kokulahlwa ngamacala amane okudicilela phansi isithunzi (crimen injuria), sibe nethemba lokuthi abaningi bazothola isifundo, unciphe lo mkhuba wo-kwedelela nokudicilela phansi isithunzi sabanye abantu.
Kuzokhumbuleka ukuthi uvicki Momberg ube ngundabamlonyeni ngonhlolanja (February) ngo-2016, ngemuva kokusabalala kwe- video ezinkundleni zokuxhumana, lapho wezwakala khona ekhuluma ngokunengeka ebheki
se ephoyiseni, waze walibiza ngegama elingemukelekile lekhafula.
Kuyo le video wezwakala futhi ekhuluma ngokudinwa ocingweni nabe-10111, ephimisela wona belu amagama anokucwasa ngokwebala.
Lesi sigameko sikavicki Momberg senzeka ngemuva nje kokuba thina ndlu emnyama sisadumele futhi siphoxekile ngokwedelelwa ngupenny Sparrow ngomasingana (January) ngo-2016.
Upenny Sparrow naye wagcina egwetshiwe, imantshi uvincent Hlatshwayo enkantolo yaseScottburgh yamhlawulisa u-r5000 noma izinyanga eziwu12 ebhadla ejele. Waphinda wagwetshwa eminye iminyaka emibili eyalengiswa iminyaka eyisihlanu ngaphansi kombandela wokuthi angatholakali futhi enecala lokudicilela phansi isithunzi kuleyo minyaka.
Ngaphambi kokuba agwetshwe yinkantolo kamantshi escottburgh wayekade ehlawuliswe yimantshi u-irfaan Khalil, we-nkantolo yezokulingana, u-r150 000, owayalelwa
ukuba awukho- khe kwi-oliver and Adelaide Tambo Trust. Wakhala ngokuthi akanayo leyo mali.
Lezi zigwebo - esikavicki Momberg nosikapenny Sparrow ngokulandelana kwazo besilindele ukuba zibe yisifundo kubo bonke labo abanomqondo ogcwele ubandlululo, abathanda ukuchukuluza abanye nokuvusa udungunyane emphakathini.
Kuyamangaza-ke nokho ukuvela kwabantu abafana nalo Adam abasakhuluma kanje.
Lokhu kukhombisa enkulu indelelo - futhi akukhona nje kuphela ukwedelela indlu emnyama kodwa kuwukwedelela nomthetho imbala.
Sengathi bonke abantu abangatholakala benze icala lokudicilela phansi isithunzi sabanye bangagixabezwa ngezigwebo ezinzima, babhadle emajele, baphume umqondo ususangulukile.
Basibuyisela emuva thina esizama ukwakha isizwe esibumbe-ne - bona bafike bafake unyawo, babhidlize.
ISITHOMBE NGABE: HEADSTART NETWORK
KUMELE ziphele izinkulumo ezicwasayo kutshalwe umoya wobunye kubantwana nasezizukulwaneni ezizayo.